February 8, 2020 – Medical Sharing
စစ်ပြေးတစ်ယောက်မှ ကုန်တိုက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သည့်ရုပ်သံ
February 8, 2020 Dr Mrs Mg
စစ်ပြေးတစ်ယောက်မှ ကုန်တိုက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သည့်ရုပ်သံ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊နကော်စီဌာမ ခရိုင်အတွင်းရှိ ကုန်တိုက်အတွင်းသို့ တပ်ပြေးတစ်ယောက်မှ သေနတ်ဖြင့် လိုက်လံပစ်ခတ်ရာ သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ကြပ်တစ်ဦးမှတွေ့သမျှလူတွေကိုသေနတ်ဖြင့်လိုက်လံပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များအပါ သေဆုံးသူ ၁၄ ဦးအထိရှိပြီဟုသိရ ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ရတ်စီမာမြို့ တာမီနယ် ၂၁ Read more
မိန်းမသားဆိုပင်မဲ့ မြေကြီးတူးပီး ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေတဲ့ အာဂ အမျိုးသမီး လုပ်စရာမရှိရင် ထင်းခွဲတယ် …….
မိန်းမသားဆိုပင်မဲ့ မြေကြီးတူးပီး ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေတဲ့ အာဂ အမျိုးသမီး လုပ်စရာမရှိရင် ထင်းခွဲတယ် ……. ဒဂုံအရှေ့က မြေကွက်တစ်ကွက် ခြံစည်းရိုးခက်ဖို့ မြေကြီးတူးစရာရှိတာနဲ့ မြေကြီးတူးမယ့်သူရှာခိုင်းလိုက်တယ်တပည့်ကျော်က ပုတ်ပြတ်တူးပေးမယ့်လူရှိတယ် ခိုင်းမလားဆိုတော့ လုပ်ကွာဆိုပြီးပြောခဲ့တာ .. ဒီနေ့မနက်သွားမှ ခါတိုင်းလို ယောကျာင်္း၃ယောက် Read more
ဂုဏ်ယူလေးစားပါသည် — အာဏာရှိရင်တောင်ဤမျှရိုးသားမည်မဟုတ်ပါ
ဂုဏ်ယူလေးစားပါသည် — အာဏာရှိရင်တောင်ဤမျှရိုးသားမည်မဟုတ်ပါ ဒီနေ့ မနက်(11:00)နာရီလောက် ကျောက်မြောင်း သီတာလမ်းက အဖြစ်အပျက်လေး အံ့သြလွန်းလို့ပါ… ဒီလိုဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ အမှိုက်လှဲတွန်းလူငယ်လေးကို ဝိုင်းရှယ်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ ….အံ့သြလွန်းလို့ပါ… 7-2-2020 ဒီနေ့ မနက်(11:00)နာရီလောက် ကျောက်မြောင်း သီတာလမ်းအိမ်ရှေ့ကားရပ်ပြီးကားထဲကဖိုင်ယူပြီး နောက်ဖုံးပေါ် ခဏတင်ပြီးကားနှင့်ပက်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများ Read more
နှာခေါင်းစည်း Mask များကို သတ်မှတ်ဈေးထက်ပိုမို၍ရောင်းချပါက ထောင်ဒဏ် နှင့် ငွေဒဏ် ပေးခံရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် .
ကျမ္မာရေးနှာခေါင်းစည်း Mask များကို သတ်မှတ်ဈေးထက်ပိုမို၍ရောင်းချပါက ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်နှင့်ဒဏ်ငွေ ၁၄၀၀၀ဝ ဘတ်ပေးဆောင်ရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် ..၂၀၂၀ ဖေ ၇ ရက် ဘန်ကောက်မြို့တွင် Coronavirus ပိုးကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်တားဆီးရေးအဖွဲ့မှ အများပြည်သူများအတွက် အစိုးရအိမ်တော်ရှေ့ဂိတ်အမှတ် ၄ တွင် Read more
နာမည်ကြီး ပလေယာ ရုပ်ရှင် ဟာသဇာတ်ကား
နာမည်ကြီး ပလေယာ ရုပ်ရှင် ဟာသဇာတ်ကား ပါးစပ်တောင် မပိတ်ရအောင် အရမ်းရီ၇တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ် .. BOBo Flim မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်မှ ကျွမ်းကျင်ပီပြင်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ် ၇ုံတင်နေပီဖြစ်လို့ လက်မှတ်တောင် Read more
သတိကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ …
သတိကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ ….သရဲကားဆိုတာ ဒါမျိုး သွေးသံရဲရဲ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တယ် မြင်ကွင်းက အစ ကြည်လင်ပျက်သား နေတာပဲ ကြည့်ရဲမှကြည့်နော် မမြင်ဖူးတဲ့သူတွေ အတွက် လက်ဆင့်ကမ်း မျှပေးအုန်းနော် သတိကွောကျတတျသူမြား မကွညျ့ရ ….သရဲကားဆိုတာ ဒါမြိုး သှေးသံရဲရဲ Read more
ရိုးသားတဲ့ တောသား မမြင်ဖူးရင် ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ
ရိုးသားတဲ့ တောသား မမြင်ဖူးရင် ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ … ဆိုရိုးအတိုင်း တောသားတွေ ဖြူစင် ရိုးသား ကြေက်တတ်ကျတယ် ဗဟုသုတ နဲတယ်ပဲ ပြောရမလားပဲ ဘတ်မှန် ဖမ်းတယ်ဆိုလို့ ဘတ်မှန်ဖြုတ်ပီး အိတ်ထဲထည့်ထားတယ် ရိုးသား ကြိုးစား တောသား @@@@@@@ Read more
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Coronavirus ကို အဝါရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
February 8, 2020 February 8, 2020 Dr Mrs Mg
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Coronavirus ကို အဝါရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ Singapore မှာ အခြေအနေမကောင်းပါဘူး … Coronavirus ကို အဝါရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်အဆင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး နောက်ဆုံး အနီရောင်အဆင့်ပဲ ကျန်တော့တဲ့ သကာလ အားလုံးလည်း စားစရာတေ စုပြီးလှောင်ထားကြလို့ Market Read more
နိင်ငံအကျိုးပြု အရံမီးသတ်ရဲဘော် ဘဘ ဦးမော်စီ